Faallooyinka - Popular Jewelry
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 260
Qoyska Puffy Wadnaha Soojiidashada Qalbiga (Qalinka)
Dandy Ng (New York, Mareykanka)
Jawhar Qoyska Soo Jiidata, Waa Jeclaaday!
Waxaan u soo iibiyay Walaashey Jumlad Doobkeeda, waana ku habboon tahay! Jijimadeedu wuxuu ahaa 4.2mm!
Qoraal Halo Ciise Madaxa Madaxa (14K)
Javier Morales sawirka meeleynta (Asbury Park, US)
14k laba tone ciise ciise
Qeybta asalka ah ayaa dib loo soo celiyay. Waxay soo bandhigeen ciis ciise kaas oo qaali ku ahaa isla qiimaha.
Halkaan buu joogay maalintii xigtay markabkii aan ka soo baxay. Wax walba waxay ku socdeen farriin-wade welina aad ayey ugu mahadnaqeen iibiyaha. Qaybta Ciise waxay ahayd mid culus oo adag. Waxaan ka jeclaaday si ka wanaagsan gabal-gadaal. Si aad ah loogu taliyay. Wont waad niyad jabi doontaa. Ganacsade weyn.
CATHERINE RIVERA (New Port Richey, Mareykanka)
Cumar Lopez (Glendale, Mareykanka)
Adeeg weyn !!
Calaamadaha Benjamin (Brooklyn, Mareykanka)
Kevin wuxuu ahaa mid waxtar leh oo iga caawiya inaan hubiyo in shaashaddayda ay tahay qeexitaanadayda. Kadib waxaan ku helay boostada maalinta xigta! PJ waa meesha kaliya ee aan ka heli doono dahabkeyga, waana sabab macquul ah.
Cuban Talyaani ah oo Cuban ah / silsilad furan (14K)
Yaab Yare / Silsilad Iyo Adeeg Cajiib Ah 5/5 Xidigood
Kevin iyo William waxay ahaayeen kuwo si layaableh u caawiyey isla markaana taageeray dhammaan su'aalahayga ku saabsan santuuqa iyo silsiladda (dhererka kala duwan, silsiladaha, shaashadda, cabirka, iwm.)
Haddii aad raadineyso inaad iibsato qaar ka mid ah dahabka, waa tan meeshaas inaad sidaas ka sameyso. Waxaad heli doontaa dhammaan su'aalahaaga oo lagaaga jawaabo oo qaybaha ayaa qurux badan. Waan soo laaban doonaa si aan u iibsado dahab badan. (Ha ka baqin inaad wax ka weydiiso suumanka ama silsiladaha la iibiyay!)
Waxaa jira sabab aad ugu jeceshahay farshaxankaaga farshaxanka ah Popular Jewelry! Waad ku mahadsan tihiin mar kale Kevin iyo William sidii aad macaamilkeyga uga dhigteen mid hagaagsan kana jawaabaya dhamaan su'aalaheyga
Ball haraaga Sanka Garaacista (14K)
Waxay ii sheegeen inaan bixiyo $ 75 sanka biin dahabka ka ah ka dib waxay iga jareen $ 75 waxayna i siiyeen sanka biin been abuur ah. Dukaan xun Waxay lacag ka xadaan dadka dalbaday aruurinta qadka.
Waad salaaman tahay! Ma awoodi kartaa inaad noo soo sheegto sida aad ku soo gabagabaysay daloolinta sanka ee been abuurka ah? Laga soo bilaabo waqtigeenii furitaanka (1988) ilaa maanta waligey kamaanaan qaban biraha dahabka lagu qurxiyo; waxaa jira 0% fursad ah iskudhac kasta oo dhaca sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan maqalno dhankaaga sheekada. Haddii loo calaamadeeyay 14K— waad sharad geli kartaa hubaal inaad heshay 14K sanka daloolkiisa dahabiga ah.
Wanaagsan Mar labaad ayaan kula adeegan doonaa.
Urdun R (Norcross, Mareykanka)
Ma weydiin karnaa santuuqa ka wanaagsan
Kevin iyo qof walbaa kor Popular Jewelry runti way i daryeeshay waxayna hubisay inaan helay dalabkeyga ASAP. Waxay ku timid si dhakhso leh runtiina waan ku faraxsanahay qaybtayda. Mahadsanid 🤲🏽
Marqueeta Jones (Washington, Mareykanka)
Dan kama lihi qaabka loola dhaqmay & ma helin lacagtayda oo buuxda sida muuqata waa inaad akhridaa daabacaadda wanaagsan ee ay ku heleen hal xiddig maxaa yeelay ma jiraan wax eber ah laakiin waxaad heleysaa 4 suulka oo hoos ah
Haye halkaas Marqueeta! Si aad u sharaxdo - lacagta dib u soo celinta waxay ku jirtaa sidii processor-ka lacag-bixinta (ie shirkadaha kaararka deynta; PayPal) waxay naga qaadaan lacag aan la soo celin karin mar kasta oo macmiilku na siiyo. Intaas waxaa sii dheer kharashyo la xiriira boostada iyo caymiska; waqtiga / shaqada loo baahan yahay si loo diyaariyo loona buuxiyo amarkaaga. Kharashaadkani waxay ku darmayaan illaa 15% wadarta kharashka gabalka; markaa waa qiimaha 15% ee khidmadda.
Ka soo horjeedka tusaalahaaga waxaan runtii rabnaa macaamiisha inay ku baraarugsanaadaan waxa ay iibsanayaan; cidina ma jecla inay bixiso khidmadahaas mana jecli inaan ku qasbo macaamiisheenna sidoo kale! Sababtaas awgeed, cabbirka cabbirka saxda ah ee gabalku wuxuu ku qoran yahay boggiisa; sidoo kale waxaan leenahay talo soo jeedin ah oo ku saabsan bog kasta si aan ugu dirno emayl wixii su'aalo ah ee ku saabsan cabirka ka hor iibsiga. Aad ayaan u jawaabayaa!
Maaddaama aan haysanno bog dhammaystiran oo loogu talagalay siyaasadeena soo noqoshada macquulna ma dhihi karo waxay ka dhigan tahay daabacaad wanaagsan. Hawl-wadeenada lacag-bixintu waxay si weyn ula socdaan macmiilka markasta oo uu jiro shaki macquul ah laakiin markan oo kale, waxay taageereen khidmadda (macnahoodu waxay rumaysnaayeen inay caddaalad ahayd.) Fadlan fahan!
Ernest Thomas (Philadelphia, Mareykanka)
Farshaxanka Deco Garnet Cross Pendant (14K)
Christopher Lovesky (St. Petersburg, Mareykanka)
Xitaa Ka Fiican Qofka
Gabal tayo sare leh waxayna u egtahay xitaa inay ka fiican tahay sawirrada. Kooxdu aad ayey waxtar u yeelatay intii hawshu socotay oo dhan. Xaqiiqdii waxaan ka heli doonaa qaybo badan PJ mustaqbalka.
Kubbadda Caanka ah ee Kubbadda Cagta
100% rasmi ah
Soojiidashada feerka weyn waxay umuuqataa midkii hore ee gacmo gashiga Dahabka ah
Dahablaha ugu fiican agagaarka
Gabalkaygu wuxuu udiray sanduuq hadiyad ah iyo dhamaan 14k dahab… .Waxaan ahaa macmiilkeeda mudo sanado ah waxaanan sii ahaan doonaa macaamilkeeda nolosha… hoos u dhiga dahabka ugu fiican agagaarka ASAP EVA
Wareegga Wareegga Guadalupe Pendant (14K)
Shaquille R (New York, Mareykanka)
Waxay umuuqataa xitaa qof kafiican
Qufulka Lobster Chain ee adag 'Miami Cuban Chain' (14K)
Ciriiri Skylar (Birmingham, Mareykanka)
Waan jeclahay waan xiraa maalin walba🙏🏾
Lynette Fitzpatrick (Elk Grove, Mareykanka)
Silsilad qurux badan iyo suuf !!
Waxaan jeclahay silsiladdeyda cusub iyo tan weyn ee ku faraxsan iibsashadeyda Hero !!
Silsiladda Spiga / Laba Jibaaran
Shaah Jas ah (Washington, Mareykanka)
Silsilad Dahab ah oo khaas ah
Silsiladda iyo santuuqa ayaa qummanaa! Aad u jawaaba aad ayaan u faraxsanahay
Cuntada isku xirka Miami Cubanlink (Jaale)
yessica (Grosse Pointe, Mareykanka)
wuxuu hadiyad kaamil ah u siiyay inaadeerkay da 'yar, aad buu ula yaabay. mahadsanid popular jewelry!
Glenn Harris (The Bronx, Mareykanka)
Nooca Talyaaniga ah ee loo yaqaan 'Curb Link Chain Silver' (Jaale)
Cabbirka saxda ah iyo kan cajiibka ah
Alex W. (Ashville, Mareykanka)
Ma aanan fileynin in dhagxaanku u garaaci doonaan sida ay sameeyeen oo kale, dareen adag oo xoog leh oo ku xiran wax qurux badan oo lacagta ku jira! Aad ayuu ugu fiicanyahay silsiladdayda 22in.
Adeegga macaamiisha ee halkan ka socdaa wuxuu ahaa mid cajiib ah. Iyagu ma aysan haysan ankh saxda ah ee aan dalbaday, laakiin Kevin wuxuu igu xirxirey kan weyn, nooca cusub ee aan lahayn lacag dheeri ah! Aad ayaa loogu taliyay in yall uu wax ka iibsado popular jewelry!
Wareegga Kanaalka Dejinta Silhouette Wadnaha Virgin Mary Pendant (14K)
Xitaa ka fiican qof ahaan
Pendent waa wax la yaab leh
Silsiladda Furfuran ee Buluugga ah (Qalin)
Tani waxay si qurux badan u egtahay haweeneydii aan ku iibsaday kuwan, waxay u muuqataa xitaa sifiican shaqsiyan weyn, quruxsan udarooyinka.